Doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo Maanta Dib loo Dhigay
Guddiga qaban-qaabada doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa maanta shaaciyay in dib loo dhigay doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug oo lagu waday in maalinta beri ah ay dhacdo doorashadiisu.
Guddoomiyaha Guddigaasi oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Geelle oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Cadaado ayaa sheegay in sababta dib loogu dhigay doorashada ay tahay arimo farsamo oo aan weli la’isla meeldhigin.
Waxa uuna sheegay Xildhibaanka arimo jira awgeed ay sabab u noqotay doorashada in dib loo dhigo, wuxuuna intaasi ku daray in doorashada ay qabsoomayso saddexda Bisha soo socota ee May.
Arimaha farsamada ee sababta u noqday Doorashada in dib loo dhigo ayaa ah inaysan diyaarsaneyn qalabkii loogu talo galay inay ku qabsoomaan doorashada Madaxtinimada Galmudug, maalmaha soo socdana si wanaagsan loo diyaarin doono.
Musharaxiin gaaraysa ilaa saddex musharax ayaa ilaa hadda la og yahay inay u taagan yihiin qabashada xilka mdaxtinimada Maamulka Galmudug.
April 30, 2017 tuugahaladilo2015
Madaxweyne Xaaf oo Xaalad Deg Deg Ah ku soo Rogay Deegaanada Galmudug (Akhrisso) October 1, 2017
Madaxweyne ku Xigeenka Galmudug oo Maanta Dhagaxdhigay Xarun Cusub oo Baarlamaankaasi loo Dhisayo (SAWIRRO) June 14, 2017
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Gobolka Galgaduud (SAWIRRO) May 29, 2017